Disadisa eo anivon’ny Leader Fanilo : manome fanazavana ny birao nasionaly | NewsMada
Misy ny disadisa eo anivon’ny antoko Leader Fanilo. Manome fanazavana ny eo anivon’ny birao nasionaly mpandrindra noho ny fampitsaharana azy ireo amin’ny asany…
Toy ny tsy misy intsony eo anivon’ny antoko Leader Fanilo ny filankevi-draharahan’ny antoko Leader Fanilo, raha ny olona mandrafitra izany. Io no anisan’ny fanazavan’ny eo anivon’ny birao nasionaly mpandrindra ny antoko Leader Fanilo, tarihin-dRakotomamonjy Jean-Max, tamin’ny mpanao gazety, teny amin’ny foibe toerany, Ampasanisadoda, omaly.
Anton’ny fanazavan’izy ireo ny amin’ny fampitsaharana ny asan’ny birao nasionaly mpandrindra, araka ny fivorian’ny filankevi-pifehezana ny 16 desambra 2015. Noho ny fahadisoana bevava izany: fandikana foto-kevitra sy ny soatoavin’ny antoko, indrindra ny fenitra etika politika.
Mitoetra ihany ny rafitra, raha ny fanazavan’izy ireo. Ny amin’ny filazana fa tsy manaja ny fitsipika anatin’ny antoko na ny etika politika, azo porofoina ny fanajan’ny birao nasionaly mpandrindra ny antoko izany, raha ny fanazavana. Ny ao anatin’ny filankevi-draharaha no tena tsy manaja ny etika politika. Satria tsy vitan-dry zareo na ny latsakemboka fandoa voafaritra ny fitsipika anatin’ny antoko aza, ohatra, araka ny fanazavana.
Manana olom-boafidy maro ny Leader Fanilo
Milaza ny birao nasionaly mpandrindra fa manana olom-boafidy maro ny antoko amin’izao fotoana izao, raha mitaha amin’ny teo aloha: solombavambahoaka dimy, ben’ny Tanàna 70, mpanolotsain’ny Tanàna anjatony. Raha ny vokatra vonjimaika tamin’ny fifidianana loholona farany eo, hahatafiditra olona eny amin’ny Antenimierandoholona ny Leader Fanilo.
Ambaran’izy ireo koa fa anisan’ny nanohana ny filoham-pirenena amin’izao fotoana izao izy ireo tamin’ny fifidianana, ary mbola mitana izay foto-kevitry ny filankevi-pirenen’ny Leader Fanilo izay. Faran’ny taona 2017 vao mifarana ny asa nifidianan’ny filankevi-pirenen’ny antoko ny birao nasionaly amin’izao fotoana izao.